Goobjoogayaal ku sugnaa meel ku dhow koontaroolka uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay inay arkeen saddex askari oo dhulka ku dhacay markii uu qaraxu dhacay, balse ma aysan sheegin inuu dhintay iyo in kale.
Balse guddoomiye ku xigeenka dhinaca ammaanka ee maamulka degmada Afgooye, Mahdi Axmed ayaa sheegay in qaraxa aysan wax khasaare ah kasoo gaarin askartii goobta ku sugnaa oo uu sheegay inay ku jiraan kuwo loo waday deegaanno gobolka ka tirsan.
"Qaraxa waxaa fuliyay nin xirnaa dharka ciidamada oo gacanta ka go'an, wuxuuna ku qarxay meel aad ugu dhow bar ay ciidamada dowladdu lacago ku qaadaan," ayuu yiri goobjooge ku sugnaa meel ku dhow koontaroolka. "Qaraxa kadib waxaan arkay sadex askari oo dhulka taala, ma garanayo inay dhinteen iyo in kale; Laakiin waxaan sheegi karaa in ruuxii qaraxa fuliyay uu dhintay."
Sidoo kale, goobjoogayaashu waxay sheegeen in ruuxa qaraxa sameeyay uu shalay tagay halkaas, iyadoo markii uu qaraxu dhacayay ay ku suganayeen koontaroolka askar badan oo ku socday degmooyinka gobolka Shabeellada hoose oo ay qaarkood gacanta ku hayaan ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM.
Weerarkan ismiidaaminta ah oo aanay jirin cid sheegatay mas'uuliyaddiisa ayaa wuxuu noqonayaa kii labaad oo degmada Afgooye ka dhaca tan iyo markii ay ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM la wareegeen bishii May ee sannadkan.